Global Voices teny Malagasy » Ilay Fetiben’ny Zavakanto Fahaterahan’ Ishinomaki Indray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Septambra 2017 5:21 GMT 1	 · Mpanoratra Airi Sugihara Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Voina, Zavakanto & Kolontsaina, Ny Tetezana - The Bridge
Iray amin'ireo zavakanto manaitra mieli-patrana manerana an'i Ishinomaki nandritra ny fetiben'ny Zavakanton'ny Fahaterahana Indray taona 2017. Sary avy amin'ny mpanoratra, ary nahazoana alalana.
Maro amin'ny olona no maka sary an-tsaina fa ny toerana iray tratran'ny tsunami enin-taona lasa izay dia mbola mitolona mafy, ahitana tranombarotra mikatona ary mbola eo am-pananganana indray ny tanàna. Izany no nantenaiko ho hita herinandro vitsivitsy lasa izay raha nitsidika an'i Ishinomaki any amin'ny prefektioran'i Miyagi, izay nahatratra hatramin'ny 9.0 ny maridrefin'ny horohorontany ary nahatratra hatramin'ny 10 metatra ny haavon'ny tsunami naterany tamin'ny 11 marsa 2011, ka niteraka fahasimbana lehibe ao amin'ny faritra.
Saingy tonga tao tanatin'ny fahagagana aho. Tonga tao amin'ny gara tsara karakara, nivoaka ho ao amin'ny taàna iray maresaka sy miroborobo ahitana olona milahatra miandry bus sy fiara manerana ny arabe aho. Arakaraka ny hidirako lalina amin'ny tanàna vao mahita ny vokatry ny tsunami somary miafina aho: marika tsy hita amin'ny tranobe, trano maro haolo, tany simba.
Ny tanànan'i Ishiomaki ao amin'ny prefektioran'i Miyagi. Saripikan'ny mpanoratra ary nahazoana alalana.
Nandritra ny dimy andro nipetrahako tao Ishinomaki, no nifanenako tamin'ny olona maro, na izany avy ao Ishinomaki na avy any ivelany, izay manan-javatra iray iraisana: samy te-hanampy ry zareo. Nahazo fanampiana ara-bola betsaka ny faritra ary sitrana araka ny hitamaso, saingy mbola tsy hita ao amin'ny tanàna ny heriny sy ny tanjany teo aloha. Izany no antony nananganana ny Fetiben'ny Zavakanton'ny Fahaterahana Indray.
Nanolotra zavatra ho an'ny rehetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana ny fetibe izay nifantoka tamin'ny zavakanto, hira ary sakafo. Mieli-patrana manerana ny tanàna ny asakanto manaitra. Manolotra sakafo sy zavatra manokana ny trano fihinanana sy ny fivarotana ao an-toerana. Mihira an-kalamanjana eo anoloan'ny olona maro ireo mpihira sy tarika manana ny lazany eo amin'ny sehatra nasionaly. Nanana tombony manokana aho afa-niresaka tamin'Atoa Gota Matsumura, tale mpanatanteraky ny fetibe, momba ny zava-niainany tamin'ny fihovitrovitry ny tany sy ny tsunami, ary ny fanantenany tamin'ny fikarakarana ity lanonana ity.
Tao amin'ny biraony Atoa Matsumura raha nihovitrovitra ny tany. Tsaroany toy ny mbola hitany ny fiakaran'ny rano hatrao amin'ny rihana voalohany tamin'ny tranobe nitoerany. Soa ihany fa tao amin'ny rihana faharoa izy. Vaky nitresatresaka daholo ny fitaratry ny biraony tamin'ny fihovitrovitry ny tany. Raha tsy afa-niala ny building ry zareo, dia niara-nandany ny alina tao niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy. Tamin'io alina io izy nanavotra olon-tsy fantatra avy amin'ny fiara iray natsikafon'ny onjan-drano mamotaka, nanafy bodofotsy sy nanome whisky azy hanafanany tena. Niezaka ny hiavo-tena mafy avokoa ny rehetra, hoy izy, ka toy ny mahatsapa ho eo ambon'ny sambo iray izany izy rehetra. Mahita hazavana kely maro mitopatopa eny lavitra eny izy, ary mankahery tena rehefa mieritreritra fa mitovy amin'ny manjo azy ihany koa ny manjo azy—mitolona, saingy mbola velona.
Ny ampitson'ny andro nialan'ny tsunami, feno atsanga (fotaka) ny arabe. Nosoritsoritany ny sehatra nahitana olona nitady sy nitsimpona ny fananan'izy ireo lafovidy tao amin'ny atsanga, izay sarotra dia sarotra ny mahita izany mazava loatra. Nitady fialofana tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra teo akaiky teo ry zareo, ka ao ry zareo no mivangongo miaraka amin'ny hafa rehetra miandry fanampiana. Kely dia kely ny toerana tany an-tsekoly, olona roa amin'ny tatami iray. Tsy ela dia nanahy ny amin'ny havany sy ny namany akaiky ry zareo. Te-hitety sekoly hamoaka hafatra miaraka amin'ny anarany amin'ireo sekoly mampiatrano mpialokaloka, milaza ny fahavelomany ny mpiara-miasa amin'Atoa Matsumura. Mifanaraka amin'izany, misy ireo olona mitety sekoly mitady ny anaran'ny olona tiany, ary tsaroany ny nahitana olona vaky fo sy mandohalika rehefa mahita anaran'olom-pantatra.
Nilaza Atoa Matsumura fa ny antony nahatonga avy hamokatra fetibe dia mifototra avy amin'ny zava-niainany tamin'ny Tsunami. Nilaza izy fa hitany ihany ny fiarany fotoana maharitraritra taorian'ny tsunami, kilaometatra vitsivitsy niala ny arabe. Saingy tsara vintana izy—maro ny olona tsy ny fananany ihany no very , fa ny havany sy ny namany ihany koa. Ary tsaroany izy diso fanantenana rehefa nisintona ny rano, fa misy ny olona sasany nitady ny harena hita maso tahaka ny vola sy ny fiara aloha vao nitady ireo olona tiany.
Ny zavakanto tsy ilaina loatra eo amin'ny fiavotan-tena, araka ny filazan'Atoa Matsumura, no maha-zavadehibe azy indrindra. Hitany ny olona maro tonga hisitraka izany sanda izany taorian'ny namoizany ny tiany nandritra ny fihovitrovitry ny tany sy ny tsunami. Tiany ireo mitsidika ny fetiben'ny fahaterahana indray hahita fifaliana sy dika ao amin'ny fiainana amin'ireo zavatra heverina ho mampalahelo sy tsy misy dikany, ary hahay hijery indray ny zavatra tsara sy ny zavatra tsy hita maso sy ny zavatra tsy azo tsapain-tanana tahaka ny fifandraisana sy ny zava-niainana ahitana fahafinaretana. Na dia tsy ilaina mihitsy aza amin'ny lafiny sasany, dia ireny no tena ilaina indrindra eo amin'ny endri-piainana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/25/106834/